Stirista na-enye ikike eserese ọhụụ ya na ezigbo data data | Martech Zone
Ndị ahịa na-azụ ihe na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị site na kọmputa gị, gaa na ibe ngwaahịa na saịtị ọzọ na mbadamba, jiri ekwentị dezie banyere ya na mgbasa ozi mmekọrịta wee pụọ ma zụta ngwaahịa metụtara ya na ụlọ ahịa dị nso.
Onye ọ bụla n’ime ndị a zutere na-enyere aka ịzụlite njirimara onye ọrụ zuru oke, mana ha niile bụ ụdị ozi dị iche iche, na-egosipụta onwe ha dị iche iche. Ọ gwụla ma ejikọtara ha, ha ka bụ nsụgharị gị dị iche iche na adreesị anụ ahụ, NJ ngwaọrụ, ndị na-ere ahịa ụwa, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ibe weebụ nke ọdịnaya, ngwaọrụ mkpanaaka, laptọọpụ, TV jikọtara, na akụkụ ndị ọzọ ị na-emekọrịta.
Njikọ na-adịgide adịgide dị ka adreesị ozi-e - na-ewekarị maka ebumnuche nzuzo - ma ọ bụ ngwaọrụ nwere ike ijikọ mpekere data dị iche iche, na -emepụta eserese njirimara jikọtara ọnụ nke na-anọchite anya echiche zuru oke nke ezinụlọ ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-enyere ndị ahịa ahịa aka ịmatakwu mkpọsa ha ka ọ dị mkpa ndị na-ege ntị.
Ewezuga ịnakọta na ijikọ data niile ahụ, nnukwu nsogbu ịma aka njirimara bara uru bụ idobe ya ugbu a. Na ndị ọrụ na-emekọrịta ihe mgbe niile otu ụbọchị, ọ dị mfe maka data ngwa ngwa bụrụ ihe mgbe ochie na ezighi ezi.
Ma ugbu a, onye na-eweta ọrụ ịre ahịa data Stirista agbagogo elu, ya na njirimara izizi mbụ na ahịa.
Ọ bụghị Okomoko
Ọ bụ ezie na a na-emelite ihe osise eserese ọ bụla na ụbọchị 30 ma ọ bụ 90 ọ bụla, ihe OMNA Identity Graph - kpughere site Stirista n'April - mmelite ọ bụla nke abụọ.
Na-enye ume ọhụrụ ezigbo njirimara data njirimara abụghịzi okomoko, kama ọ bụ mkpa. Ihe onye ọrụ dị mkpa bụ ọrụ ziri ezi nke data ziri ezi, ihe dị mkpa na izi ezi bụ data ọhụrụ.
Anyị na-anọgide na-anụ site na ndị na-ere ahịa na-enwe nkụda mmụọ bụ ndị e kwere nkwa inweta ezigbo data ọgụgụ isi nke ndị ahịa naanị iji chọpụta na ihe ka ukwuu n'ime ihe ha na-eme iji soro ndị ahịa na atụmanya mee ochie, data ezighi ezi. Stirista na-eweta OMNA n'ahịa, eserese mbụ nke njirimara n'ezie, nke emelitere na nke abụọ ma nye ụlọ ọrụ ihe ọmụma ha chọrọ iji ghọta nke ọma ezinụlọ ha lekwasịrị anya - ebe ha na-arụ ọrụ, otu ha si emefu ego ha, ngwaọrụ ha na-eji, yana ebe ha na-eleta n'ụzọ dị nchebe nke nzuzo.
Ajay Gupta, Onye isi oche Stirista
Nke mbụ, data njirimara gbanwere ngwa ngwa. Adreesị n'okporo ámá, njide ngwaọrụ, ịzụta data ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na-enyere aka ịkọwa otu onye ma ọ bụ ezinụlọ na ụzọ kwekọrọ na nzuzo. Chee echiche ugboro ole n’ụbọchị ị na-eme nhọrọ ọhụrụ banyere ịlele ọdịnaya, ikiri mmemme, ịzụta ihe, ma ọ bụ ịga ebe ụwa n’ezie.
Nke abuo, ebe a na-erute ndi mmadu ma obu ezinulo ozi di nkpa na-agbanwe ngwa ngwa. Karịsịa, kuki nke atọ na-apụ n'anya, yana ike ịlele ma ọ bụ kwupụta mgbasa ozi na ngwaọrụ mkpanaka na-esiwanye ike. Linear TV na-agbada, ka ndị na-ekiri ha na-aga na isi ọdịnaya ndị ọzọ.
Iwu ohuru na mmata banyere onye oru nzuzo emeela ka onye ọrụ kwenye na amaghi aha ya ihe di nkpa nke nchikota data ma obu njikwa njirimara.
OMNA na - eweputa ọtụtụ ijeri mmekọrịta nke mejupụtara ihe nchọpụta 500 maka profaịlụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa chọrọ igwu ala n'okpuru ihe eserese njirimara zuru ezu, ha nwere ike ịnweta eserese mejupụtara: ihe karịrị nde 90 nde ezinụlọ US na IP Graph, ihe karịrị 1 ijeri ngwaọrụ ejikọrọ na Eserese Ngwaọrụ, yana data gbasara ebumnuche ebe na ije nke na-aga n'ihu emelitere na Eserese Ebe.
Dị ka ọtụtụ ndị ahịa na-aghọta, data sitere na kuki ndị ọzọ bụ nke na-ezighi ezi na agbanyeghị, ọ na-ekewa ndị mmadụ na usoro nchọgharị dijitalụ ma ọ bụ mkparịta ụka ngwa mkpanaka nke na-egosighi ụdị ọdịmma ha.
N'aka nke ọzọ, data nke mbụ na nke abụọ nke mebere isi na eserese eserese dị ka Stirista's OMNA bụ mkpebi na-ezi oke. Dị ka mwekota nke dị iche iche data onwe, ihe osise ndị dị otú ahụ na-enye nkọwa zuru ezu banyere ọdịmma mmadụ na nke mmadụ.
Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na eserese njirimara abụrụla isi ọrụ maka ndị na-ere ahịa na gburugburu ọhụụ a.
Ọ nwere ike ịgwa mgbasa ozi nyefere na ezinụlọ nyere na TV ejikọrọ (CTV) usoro ndu nke mgbasa ozi, eriri, na n'elu-na (OTT) Gụgharia ọrụ. CTV gburugburu enweghị ohere ịnweta kuki ma bụrụkwa ubi nwere mgbidi nke ebe enwere ike kpebisie ike maka ndị na-ekiri ya site na ịgwakọta ọtụtụ data njirimara na eserese njirimara.
Ihe eserese njirimara nwere ike iduzi mgbasa ozi ma ọ bụ ozi ọzọ na ngwaọrụ mkpanaka nke ndị ezinụlọ, ma ọ bụ mgbasa ozi na ọdịnaya enyere ndị ọrụ gosipụtara na weebụsaịtị.
N'inwe ọtụtụ ụdị ngwaọrụ na nyiwe dị iche iche maka ndị na-azụ ahịa, otu n'ime nsogbu kachasị na-eche ndị na-ere ahịa ihu na-ezipụ ozi dị mkpa gafere ọwa nke mmekọrịta - mana ịkọwapụta ugboro ole ha ka ndị na-ele ha wee ghara ịtụ ụjọ. Tụkwasị na nke a, enwere nsogbu nke ịkọwapụta mmetụta nke ozi ma ọ bụ mkpọsa enyere na ịzụta ihe, iji nyochaa ịdị irè nke mmefu ahịa e nyere.
Zọ kachasị mma iji mee nke ahụ bụ site na ịghọta otu ezinụlọ ma ọ bụ otu onye n'ofe ngwaọrụ yana ụwa n'ezie, site na eserese njirimara zuru oke na nke dị ugbu a. OMNA na-eme ka ụdị dị iche iche nke ndị ahịa ha na ndị ọbịa na-erughị awa 24, jikọta ma bulie profaịlụ na data OMNA ka akara wee mara karịa ndị nke ya.
Ka oria ojoo a na-ala, ndị na-ere ahịa ugbu a na-agwa ụwa ọhụụ na-apụta maka data ndị ahịa. Ihe njirimara eserese MONA bụ ngwaọrụ dị mkpa maka ịgagharị iche na njiri mara nke ndị mgbasa ozi na mkpa na nzuzo nke ndị na-azụ ahịa, na-agba ọsọ ọsọ nke ndụ.
Pịa ebe a Maka Ozi ndị ọzọ na OMNA
Tags: gupta ajaydata omumejikọọ igwe onyonyocctvdatadata igwe mmadụnjirimara esereseọdịmmaomna njirimaran’elu-n’eluzụta datazuo ebumnucheedemedeonye nkiri mmasị